Best MetaX Alternative: Ku dar metadata in Aideo kasta iyo DVD
> Resource > Video > Hel Best MetaX Alternative
MetaX waxaa loo isticmaalaa in DEAD filimada aad, TV muujinaysaa. Ka dib markii dooxeen DVD ah, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si toos ah u gura metadata, sida magaca show, magaca dhacdo, iwm MetaX laga yaabaa in aan ka heli metadata kasta oo aad u barnaamijkan TV gaar ah. Ma jiraa software wax la mid ah in u samayn karaa? Sure, waxaad xaq u weyn yihiin! Waxaad isku dayi kartaa xal kale oo lagu MetaX.
Marka ay timaado in kale ah in MetaX, Wondershare Video Converter Ultimate for Mac ( Video Converter Ultimate ) noqon doonaa dooqa koowaad. Waxaa gabi ahaanba waa aalad boosaska badan oo horumarsan idiin! Fadlan akhri Faa'iidooyinka ay ka badan Softwares kale oo free download u leeyihiin isku day ah.
Waa maxay Tani Alternative MetaX fiican
Keen metadata u filimada, bandhigyada TV iyo videos guriga ka mid ah qaabab video, DVD, oo maqal ah.
Ku dar metadata ee 30X xawaare ka dhaqso badan codsiyada kale oo aan khasaaraha tayada wax.
Taageerada personalizing metadata oo waafaqsan shuruudaha aad.
Noqo awood diinta iyo sixiddiisa videos, duuban video iyo dvd gubanaya.
Beddelaan kasta video ama DVD inuu u ciyaaro qalabka macruufka
Sida loo isticmaalo Tani MetaX Alternative
Software waxa uu si fudud ah si ay u isticmaalaan interface. Waxaad ku dhameysan kartaa habka metadata ku daray in qasabno yar. Halkan waa tutorial ka kooban.
1 dar videos ama DVD kale si ay u MetaX galay
Si aad u dajiyaan videos ah, kaliya aad u riixi kartaa "File" on menu ugu sareeya, dooro "Load Media Files". Wixii DVD ah, fadlan dooro "DVD Load Files". Ama waxaad uun jiidi karaan oo iska software ah.
2 Dooro qalab Apple sida qaab wax soo saarka
Ugu botton ee interface ka, fadlan guji "Qalabka" qaab Murayaad wax soo saarka, dooro iPone, iPad ama Apple TV sidii qaab wax soo saarka. Sidoo kale si MetaX kuu ogolaanayaa inaad doorato M4V hoos Video qaybta sidii qaab wax soo saarka.
3 dar metadata si aad video ama DVD
Riix icon this si arbushin ilaa suuqa kala metadata ku daray ah, nooca ugu video iyo DVD magaca, guji "baadh". Markaasay aad video ama DVD waxaa si toos ah tagged. Waxaad ka arki kartaa video ee jilayaasha, agaasimayaasha, tag, sharaxaad iyo comment, iyo iwm waa Waxyaabaha kaliya in si fudud.
Haddii aad rabto in aad u astaysto macluumaadka metadata, riix qaybta, sida jilayaasha ah, in wax ka bedel. software Tani waxay taageertaa metadata tafatirka.
4 Play videos on qalab Apple la kale MetaX ah
Tani waa tallaabadii u dambaysay. Fadlan guji icon tan hoose ee interface ka. Your videos la synced doonaa in Lugood leh meeleyn saxda ah. Wixii filimada, ama ay muujinayso TV, waxa ay hoos yimaadaan ay waraaqaha ku Lugood. Marka aad gujisid aad filim ama TV show, waxaad ka akhrisan kartaa metadata ay u badan video ku saabsan og.